Guddiga maamul-baahinta ee Puntland oo sheegay in ay daraasaad ka hirgalin doonaan 5 ka mid ah degmooyinka Puntland. – Radio Daljir
Garowe, Aug 18 – Marwo Maryam Maxamed Cabdulle, guddooomiyaha guddiga maamul-baahinta ee Puntland oo bishii May, 2011 uu magacaabay M/weyne Faroole, ayaa shir jaraa’id oo ay ku qabatay caasimada Puntland ee Garowe ku soo bandhigtay qorshaha guddiga iyo turxaan bixinta caqabado ay hore u iclaamisay hay’ada cilmi-baarista Puntland ee PDRC.
Mawro Maryam waxaa ay sheegtay in iyaga oo ka duulaya daraasaadkii iyo talooyinkii PDRC uu guddigu u xushay shan (5) ka mid ah degmooyinka Puntland in laga hirgaliyo daraasaad xaqiiqa-raadin ah oo si dhab ah u eegaya caqabadaha golayaahsa deegaanka, wada-shaqayn la’aanta bulshada iyo golayaasha, iyo xiriirka hoose ee u dhexeeya dawladaha hoose iyo dawlada dhexe.
Shanta dego ee uu guddiga u doortay in daraasaarka laga hirgaliyo ayaa ka ah Badhan, Bandar-bayla, Eyl, Jariiban & Taleex oo ka kala tirsan 5 ka mid ah gobollada Puntland.
Ujeedada daraasaadka ayaa ay Mawro Maryam ku sheegtay in ay tahay qiimayn lagu sameeyo wada-shaqaynta bulshada iyo golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobollada.
Marwo Maryam waxaa ay sheegtay in natiijada daraasaadka ay sameeyaan ay la wadaagi doonaan dawlada, loona adeegsan doono sidii xal loogu heli lahaa, sarena loogu qaadi lahaa wada-shaqaynta ka dhexaysa bulshada iyo golayaasha deegaanka, iyo adkaynta xiriirka ka dhexeeya golayaasha deegaanka iyo dawlada dhexe.
Marwo Maryam waxaa ay xustay in fikirka samaynta guddiga maamul-baahintu uu ka dhashay daraasaad ay samaysay hay’ada cilmi-baarista Puntland ee PDRC oo iftiimisay wada-shaqayn la’aanta ka dhaxaysa dawladaha hoose ee gobollada iyo dawlada dhex ee Puntland; waxaa ay daraasaadka PDRC xuseen 3 caqabadood oo la sheegay in ay sabab u yihiin tayo darrida dawladaha hoose, iyo hoos u dhaca xiriirka ay la leeyihiin dawlada dhexe.
Caqabadaha ay PDRC xustay ayaa waxaa ka mid ah:
1. Xulashada golaha deegaanka oo liidata, keentana khilaaf iyo burbur ku yimaada golaha deegaanka,
2. Ilaha dhaqaale ee degmooyinka oo xadidan, keentana in hoos u dhac ku yimaada adeegyada bulshada,
3. Xiriirka u dhexeeya dawladaha hoose ee degmooyinka iyo dawlada dhexe oo liita.
PDRC waxaa ay talooyin ka bixisay sida ay la tahay in lagu xallili karo caqabadaha ay ka soo dheegatay daraasaadka ay samaysay, waxaana ay soo jeedisay:
1. In la sameeyo guddi isku-dhaf ah oo kooban xukuumada, baarlamaanka, bulshada rayidka ah, iyo hay’adaha deeq-bixiyayaasha, qaabilsanna xal u helidda iyo baahinta maamulka ee gobollada iyo degmooyinka durugsan.
Daraasaadka PRDC ayaa laga hirgeliyey 15 ka mid ah 43 degmo ee ay Puntland ka kooban tahay.
Xukuumada Puntland oo ka shidaal qaadanaysa talooyinka hay’ada PDRC ayaa bishii May, 2011 waxaa ay magacawday Guddiga Maamul-baahinta oo ka kooban xubno ka kala socda hay’adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn.